Rindrambaiko vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina - Mpanamboatra tontonana vita amin'ny alimina ao Shina, mpamatsy
Mombamomba ny vondrona
takelaka mitambatra fototra mihombo amin'ny alimo
tontonana mitambatra alimo
Takelaka plastika aluminium florocarbon miloko
Nano manadio tena lovia plastika aluminium
Takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny alimo
Art miatrika takelaka plastika vita amin'ny aliminioma
Takelaka plastika antibakteria sy antistatika
Veneer aliminioma hyperbolic
4D veneer alim-bary vita amin'ny kitapom-bary
Vato vita amin'ny alim-boaloboka
Panel vita amin'ny gazy vita amin'ny aliminioma
Vokatra Sheet Aluminium
Panel plastika aluminium-plastika
Ny famirapiratan'ny tontolon'ny plastika aluminium-flolorararôma (chameleon) dia avy amin'ny endrika voajanahary sy marefo izay namboarina. Nomena anarana izy noho ny lokony miovaova. Ny velaran'ny vokatra dia afaka maneho karazana perla tsara tarehy sy maro loko amin'ny fiovan'ny loharano sy ny zoro fijery. Izy io dia mety indrindra ho an'ny haingo anatiny sy ivelany, rojo ara-barotra, doka fampirantiana, fivarotana fiara 4S fiara ary haingon-trano hafa ary aseho amin'ny toerana ampahibemaso.
Miorina amin'ny tombony amin'ny fahombiazan'ny tontolon'ny plastika plastika fluorocarbon, ny teknolojia avo lenta nano coating dia ampiharina hanatsara ny lisitry ny fampisehoana toy ny fandotoana sy ny fanadiovan-tena. Izy io dia mety amin'ny haingon-trano rindrina ambainy misy fepetra takiana amin'ny fanadiovana ny solaitrabe ary afaka mitazona tsara tarehy mandritra ny fotoana maharitra.
Ny takelaka plastika vita amin'ny alim-by dia karazana fitaovana tsy misy afo firakofy avo lenta ho an'ny haingon-trano. Izy io dia karazana plastika vita amin'ny plastika metaly vaovao, izay misy takelaka vita amin'ny alimika mifono vy sy fitaovana famolavolana polyethylene plastika miovaova amin'ny alàlan'ny famafana mafana miaraka amin'ny sarimihetsika poloney (na dity mafana miempo). Noho ny fisehoana kanto, ny lamaody tsara tarehy, ny fiarovana ny afo sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanamboarana mety ary ny tombony hafa, dia heverina fa ireo haingon-trano haingony avo lenta ho an'ny haingon-trano rindrina maoderina dia manana ho avy mamiratra.
Ny tontolon'ny plastika vita amin'ny plastika dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny plastika mahery, ny fahasamihafana amin'ny loko, ny toetra ara-batana miavaka, ny fanoherana ny toetr'andro, ny fikojakojana mora foana sns. Ny fahombiazan'ny birao miavaka sy ny fisafidianana loko marevaka dia afaka manohana ny filan'ny mpamorona endrika faran'izay betsaka, mba hahafahan'izy ireo mampihatra ny heviny mahafinaritra amin'ny fomba tsara indrindra.
Ny takelaka plastika vita amin'ny alim-bolo sy antistatika sy antistatika dia an'ny takelaka plastika alimika manokana. Ny firakotra fanoherana ny static eo amboniny dia mampifangaro ny hatsarana, ny fiarovana ny bakteria ary ny tontolo iainana, izay afaka misoroka tsara ny vovoka, ny loto ary ny bakteria ary mamaha ireo olana samihafa ateraky ny herinaratra mijanona. Izy io dia mety amin'ny haingon-trano haingon-trano amin'ny fikarohana siantifika sy ny famokarana, toy ny fanafody, elektronika, sakafo ary tarehy.
Ny Composite Aluminium Composite dia fohy toy ny ACP. Ny endriny dia vita amin'ny ravina aliminioma izay manodinana sy manamboatra ny fonosana amin'ny loko. Izy io dia karazana fitaovana vaovao amin'ny alàlan'ny famolavolana ravina aluminium miaraka amin'ny fotony polyethylene aorian'ny fizotran'ny teknika andian-dahatsoratra. ara-nofo (vy sy tsy metaly), mitazona ny toetra amam-panahy (aliminiam-by sy polyethylene tsy metaly) tena izy ary maharesy ny fatiantoka ny fitaovana tany am-boalohany, noho izany dia mahazo fampisehoana materialy tena tsara, toy ny haingo mihaja sy tsara tarehy, maro loko; UV-porofo, harafesina-porofo, fiantraikany-porofo, afo-porofo, hamandoana-porofo, feo-porofo, hafanana-porofo,
erthquake-proof; maivana sy mora fikirakirana, mora fandefasana ary mora apetraka. Ireo fampisehoana ireo dia mahatonga ny ACP ho avy tsara amin'ny fampiasana.
Manampia: No.2188, Road Songzheng, Distrikan'i Songjiang, Shanghai, Sina 201604